DHAB KA HADAL: Hawada Soomaaliya iyo asbaabaha loo wareejin la’yahay? | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
Hadaba, maxey tahey sababaha loo soo wareejin la’yahey hawada Soomaaliya, yaa ka dambeeya?, yaase hada maamula?, xafiiska ugu weyn ee laga hago hawada Soomaaliya halkuu ku yaalaa?, yaa ka shaqeeya?, yey u shaqeeyaan?, yey u dhasheen?, mushaarkoodu muxuu yahey?, su’aalahaas dhammaantood waxaan kaga warramayaa maqaalkan Insha Allaah
Xafiiskan waxaa ka shaqeeya shaqaalo caalami ah tan iyo goortii la aasaasey. Shaqaalahan caalamiga ah ee ajnabiga wada ah waxaa lagu shaqaaleysiiyey qaabka ay UN­ta ku shaqaaleysiiso dadka. Dadkan dhamaantood waa shaqaalo UN iyo ICAO. Waxa ay matalaan ICAO iyo UN. Waxaa xafiiska ka howlgala shaqaala gaaraya 15 illaa 20 qof oo iskugu jira kuwii hagayey hawada Soomaaliya, kuwii qaabilsanaa dhinacyada xafiiska sida dhaqaalaha, sharciyada, howlwadeenada iyo dhammaan wax walboo xafiis caalami u baahnaa.
Xafiiskan tan iyo goortii uu howlgaley wax ka badan laba qof oo Soomaali ah kama shaqeynin. Labadaa qof ee Soomaaliga ahna waligood kama qaban xafiiskan xil weyn. Labadan qof waxaa loo isticmaaley maqaar­saar si ay hey’adaha maamula hawada Soomaaliya ay ugu murmaan in xafiiska ay Soomaali ka shaqeeyaan hadii muran laga keeno, lagana keen muran, weyna is difaaceen dhowr mar oo hore lagu qabsadey sababta ay Soomaali uga shaqeynin xafiiska.
Wasiiradii soo marey Soomaaliya ee qaabilsanaa hawada Soomaaliya waxey in badan ka codsadeen ICAO iyo UN iney tababaraan shaqaala Soomaaliya oo ka howlaga xafiiska hagida hawada Soomaaliya ee Nayroobi iyo kan Muqdisho marka la soo wareejiyo maamulka. Waxa ay codsigaasi inta badan kala kulmi jireen ballan­qaadyo kala duwan sida in la tababari doono tira 20 qof oo Soomaaliyeed mudo 6 bilood gudahood. Ballan­qaadyadaasi dhammaantood midna kama hirgalin, lamana daba­galin, halkii baana looga hadhey.
Wasiir kaloo Soomaaliya oo isna qaabilsanaa hawada Soomaliya ayaa ka codsadey Turkey iney shaqaala Soomaliya u soo tababaraan oo qaabilsanaan doono hawada Soomaaliya marka ay Soomaaliya la soo wareegto. Turkey codsigii waa ay aqbashey sida wararkiii iyo shirarkii jaraa’id xilligaa ay qoreen inta u dhaxeysey sanadka markuu ahaa 2011­2013, balse ballan­qaadkaasi isna waxa uu noqdey mid aan yeelanin daba­gal, halkii baana looga hadhey.